What is Branding? Branding ဆိုတာမိတျဆှတေို့ရဲ့Logoဖွ | Myanmar Web Store
Branding လုပ်သည်ဆိုသည်မှာ မိတ်ဆွေတို့၏ ဆောင်ပုဒ်ကိုဖြစ်စေ LOGO အမှတ်တံဆိပ်ကိုဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြစ်စေ အလားတူ မိတ်ဆွေတို့ အဓိကထားချင်သော အရာကို အသုံးပြု၍ မိတ်ဆွေတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို customers များ စိတ်ထဲတွင် စွဲထင်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် – BMW ဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့ ဘာဆိုတာ ပြောစရာမလိုအောင် အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် branding လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလျှင် သုံးမိနစ်ပဲစောင့် .. ဗိုက်စာနေလား…ကိုစား ဆိုတာနဲ့ ဘာဆိုတာ သိနိုင်အောင် ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် Branding လုပ်ခြင်း …
Logo အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ branding လုပ်ထားတာကတော့ Technology ပစ္စည်းများတွင် နေရာယူထားသော APPLE တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ မိတ်ဆွေတို့၏ လုပ်ငန်းများ ပစ္စည်းများကို Website များမှတဆင့် Branding ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Myanmar Web Store မှ မိတ်ဆွေတို့ လုပ်ငန်းအတွက် website ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပက်သက်သော ကိစ္စအဝဝအား အကောင်းမွန်ဆုံး ၀န်ဆောင်မှု ၊ အချိုသာဆုံးနှုန်းထားများဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ တာဝန်ယူပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Related Articles- Website to Android App
Marketingနှင့်Branding လုပ်ခြင်းရဲ့ကွဲပြားချက်ကဘာလဲ?" >